ကြယ်ပေါက်စ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကြယ်ပေါက်စ ဆိုသည်မှာ မိခင်မော်လီကျူလာတိမ်တိုက်မှ ထုထည်အား တည်ဆောက်နေဆဲ သက်တမ်းနုကြယ်ဖြစ်သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်သည် ကြယ်တို့၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်၌ အစောဆုံးဖြစ်သည်။ နေထူထည်ခန့်ရှိ ကြယ်တစ်စင်းသည် အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀၀၀ ကြာရှည်ခံကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ကြယ်ပေါက်စဆိုသည့် အကြမ်းဖျင်းအဆိုအား Chushiro Hayashi ဆိုသူက ပထမဆုံး အဆိုပြုခဲ့သည်။ပထမဆုံးအဆို၌ အရွယ်အစားကို များစွာခန့်မှန်းခဲ့သည်။ တွက်ချက်မှုပေါင်းများစွာမှ  နေကဲ့သို့ ကြယ်ပေါက်စများတွင် ဓာတုဗေဒဒြပ်စင်ပါဝင်မှုသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ၇၁.၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဟီလီယမ် ၂၇.၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ လေးလံသော ဒြပ်စင်များ ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြလေသည်။
၁ ကြယ်ပေါက်စတို့၏ အမျိုးအစား
↑ Stahler, S. W. & Palla, F. (2004)။ The Formation of Stars။ Weinheim: Wiley-VCH။ ISBN 3-527-40559-3။ Cite uses deprecated parameter |lastauthoramp= (အကူအညီ)
↑ Hayashi, C. (1966). "The Evolution of Protostars". Annual Review of Astronomy and Astrophysics 4: 171. doi:10.1146/annurev.aa.04.090166.001131.
↑ Larson, R. B. (1969). "Numerical Calculations of the Dynamics ofaCollapsing Protostar". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 145: 271. doi:10.1093/mnras/145.3.271. Bibcode: 1969MNRAS.145..271L.
↑ "Formation of Solar-Type Stars in Spherical Symmetry: I. The Key Role of the Accretion Shock" (1980). Astrophysical Journal 236: 201. doi:10.1086/157734. Bibcode: 1980ApJ...236..201W.
↑ Lecture notes from an astronomy course
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြယ်ပေါက်စ&oldid=716310" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။